Wafti uu hogaaminayo wasiiru dawlaha Arrimaha Gudaha ee Soomaliya oo galabta ka soo degay Galkacyo. – Radio Daljir
Wafti uu hogaaminayo wasiiru dawlaha Arrimaha Gudaha ee Soomaliya oo galabta ka soo degay Galkacyo.
Nofeembar 3, 2009 12:00 b 0
Galkacyo Nov 03 – Waxaa galabta gegida diyaaraha ee magaalada Galkacyo ka soo degay wafti ka socday dawladda federaalka ah ee Soomaaliya oo uu hogaaminayo wasiiru dawlaha wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya C/rashiid Maxamed Xiddig.
Waftigaan oo ka koobnaa dhawr xubnood ayaa waxaa ka mid ahaa xildhibaanno ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya iyo taliyaha ciidanka bilesyka Gen. Cabdi Xasan Cawaale ?Qaybdiid? waxaana garoonka si diirran ugu soo dhaweeyey mas?uuliyiinta kala duwan ee maamulka gobolka Mudug, shacab iyo cutubyo ciidan ah oo xilli hore hlkaasi lagu sii diyaarshay.
Taliyaha ciidanka bileyska Soomaaliya Gen. Cabdi Xasan Cawaale ?Qybdiid?, ayaa saaxafadda warbixin kooban ka siiyey ujeedada socdaalkooda, wuxuuna sheegay in ay salka ku hayso kulamo ay doonayaan in ay la yeeshaan mas?uuliyiinta sar sare ee maamulka Puntland iyo waliba kuuliyadda ciidanka bileyska ee degmada Carmo oo ay booqan doonaan halkaasi oo taliyihu ciidan tababar ugu soo xiri doono.
Md. Qabdiid, waxaa uu si ballaan ugu mahadceliyey mas?uuliyiintii garoonka ku soo dhaweysay iyo dhammaan shacabka gobolka Mudug oo uu sheegay in uu uga mahadcelinayo wakhtigii dheeraa ee ay garoonka ku sugayeen.
Taliyuhu waxaa uu salaan sharaf ka qaatay cutubyo ciidan ah oo garoonka ku suganaa qaybna ka ahaa soo dhaweynta waftigii uu la socday, waxaana hadal kooban siiyey taliyaha, Cumar Saalax Canjeex oo ah taliyaha kuxigeen 3-ad ee ciidana bilesyka Puntland oo u sheegay in ay ciidankaani yihiin ciidankii gobolka ee ammaanka iyo illalinta nabadgalyada u xilsaarnaa.
Waxaana intaasi kadib waftiga loo sii galbiyey Hotelka Taar, halkaasi oo ay isla markiiba kulan la galeen mas?uuliyiinta gobolka Mudug, kulankaasi oo la tilmaamay in uu ahaa mid looga hadlayo xaaladda gobolka Mudug gaar ahaan midda amni ee magaalada Galkacyo.
Waftigaan ayaa lagu wadaa muddo todobaaddo ah in ay joogaan Puntland, iyagoo dhammaanba tagi doona gobollada kala duwan ee maamulka Puntland sida aan ka soo xiganay qaar ka mid ah xubnaha waftiga.
Ma ahan markii ugu horraysay oo wafti ka socdaa dawladda FKMG ah ee Soomaaliya ay yimaadaan deegaannada Puntland, wuxuuna safarkoodaani qayb ka yahay xiriirka iyo is kaashiga ka dhaxeeya Puntland iyo dawladda Soomaaliya.
D/Hoose ee Bossaso oo qabatay shir lagu soo bandhigay warqada aqoonsiga.